LibreELEC 9.2.1 inouya nerutsigiro rweWiredGuard uye yakavakirwa paKare 18.6 | Linux Vakapindwa muropa
Ini pachangu, uye ndichifunga kuti Raspbian inopa zvakawanda, ndinotenda kuti handisi "chinangwa" chechisarudzo chakadai, asi chine musika wayo. Tiri kutaura nezve inoshanda sisitimu yeRaspberry Pi iyo yakagadzirirwa kumhanya Kodi uye vhezheni itsva yakaburitswa maawa mashoma apfuura. Kunyanya kutaura, zviripo izvozvi ndizvo LibreELEC 9.2.1, dhirivhari nyowani yasvika mwedzi mitatu yapfuura yekare uye izvo, sezvatinoverenga mu kusunungura chinyorwa, inoitika kuve yakavakirwa paKare 18.6, yazvino vhezheni yeakakurumbira multimedia player.
Sekureva kwevagadziri vayo, LibreELEC 9.2.1 ine zvakawanda shanduko uye kugadzirisa kune mushandisi chiitiko uye kudzokororwa kwakazara kweiyo yepasi inoshanda system kernel kusimudzira kugadzikana uye kuwedzera rutsigiro rwezvigadzirwa zvichienzaniswa neLE 9.0. Pazasi iwe une runyorwa rwezvinhu zvitsva zvakaverengerwa mune iyi vhezheni.
Chii chitsva muLibreELEC 9.2.1
Kubva paKare 18.6.
WireGuard rutsigiro rwakawedzerwa muzvirongwa.
Kugadziridzwa uye shanduko yeiyo Raspberry Pi 4:
Iye zvino unofanirwa kuwedzera "hdmi_enable_4kp60 = 1" (isina makotesheni) ku config.txt kana isu tichida kushandisa iyo 4K kuburitsa kweDP4. Mutsara uri pamusoro hausisiri kushanda.
Kuita uye maitiro pane 4B zvakagadziridzwa.
Iyo 4B ikozvino inoshandisa iyo SPI flash yeiyo bootloader. Iyo yazvino firmware inongotsigira chete SD makadhi kubhutsu.
Tsigiro yeHBR odhiyo ne3D vhidhiyo yakawedzerwa.
Vashandisi varipo vanogona kugadzirisa kune iyo nyowani vhezheni kubva kune imwecheteyo inoshanda sisitimu, chimwe chinhu chichaitwa otomatiki pachangotanga. Kune matsva matsva, unogona kushandisa iyo chishandiso chepamutemo yeWindows, Linux uye macOS inowanikwa kubva Iyi link. Imwe sarudzo ndeye kushandisa iyo NOOBS yeRaspberry, iyo yatichave tichiisa yapfuura vhezheni iyo ichagadziriswa otomatiki kubva kune inoshanda system.
Vagadziri vanovimbisa izvozvo ivo vari kugadzirira kuvandudza kweshanduro dzeramangwana, pakati payo kuiswa kweLinux 5.x kwakamira, asi izvo zvakadaro zvinofanirwa kumirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » LibreELEC 9.2.1 inosvika nerutsigiro rweWiredGuard uye yakavakirwa paKare 18.6